﻿ पेन्टको गन्ध स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक ?
पेन्टको गन्ध स्वास्थ्यका लागि कति हानिकारक ?
भवनका भित्ताहरुमा लगाइने पेन्टबाट अत्यन्तै कडा गन्ध आउने गर्दछ जसकारण धेरैलाई सास लिनमा असहज हुन्छ भने कतिलाई रिँगाटा लाग्नेसम्म हुन सक्छ । त्यसैले पनि पेन्टमा प्रयोग हुने रसायन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्नेप्रति धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
केही समय अगाडि एक जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा पनि काममा साधारण पेन्टसँग सम्पर्कमा आउने महिलाहरुले अटिजम स्पेक्ट्रम विकार भएको बच्चालाई जन्म दिने सम्भावना अधिक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । यसमा जति धेरै पेन्ट सामु रह्यो त्यति नै अटिजमको खतरा बढ्दै जाने अनुसन्धानमा पत्ता लागेको हो । यसरी पेन्ट र त्यसको गन्ध, स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य जोखिमदायक पक्षहरुसँग पनि सम्बन्धित रहेको प्रमाण यसअघि पनि फेला परिसकेको छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि बेन्जिन एक स्थापित कार्सिनोजेन अर्थात जिवित टिस्युबाट क्यान्सर उत्पन्न गराउन सक्ने तत्व हो । यो पेन्टका साथै अन्य वस्तु जस्तै, ग्लु, मार्कर, गाडिको धुँवा, किटनासक लगायतमा पनि हुन्छ । यस्ता थुप्रै वस्तुमा हुने विभिन्न कार्सिनोजेनहरुसँग हामी लामो समय सम्पर्कमा आइरहनुपर्ने भएमा वा अत्याधिक बेन्जिनको सामना गरिरहनुपर्दा मात्र चिन्ताको विषय हुनेछ । तर हामीले भर्खर पेन्ट गरेको र हावा भित्रिने ठाउँ कम भएको कोठामा समय बिताउनुले कडा स्तरमा हामीलाई बेन्जिनसँग सम्पर्कमा ल्याउन सक्छ जसले धेरै हानि पुर्याउन सक्छ ।
बेन्जिन सहित यस्ता थुप्रै कार्सिनोजेनसँग सम्भावित दैनिक सामना गरिरहनेमा ल्याबका कर्मचारी, पेन्टको काम गर्ने व्यक्ति, रासायनिक उद्योगमा काम गर्ने, सौन्दर्य उद्योगका कर्मचारीहरु पर्छन् । बेन्जिन जस्तै विभिन्न वर्गका रसायनहरु ‘भोलाटायल अर्गानिक कम्पाउन्ड’ भिओसीमा पर्दछन् । यसरी उच्च स्तरमा प्रवाह भइरहेका भिओसीमा सास फेर्नुले छोटो अवधिको समसया जस्तै टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, रुघा लाग्ने, आँखा चिलाउने, रिँगाटा लाग्ने देखि गम्भीर समस्या जस्तै अङ्गमा क्षति पुग्नेसम्म हुन सक्छ । त्यस्तै गर्भवती महिलाहरु यसको सम्पर्कमा आए, बच्चाको तौल घट्ने, ढिलो विकास हुने खतरा समेत बढ्न जान्छ ।
यस्तोमा अनुसन्धानकर्ताहरु अझै पनि ती केमिकलले शरीरलाई कसरी हानि पुर्याउँछ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । जसबीच केही पदार्थ हामीले सास लिँदै गर्दा वा छाला मार्फत रगत नलीसम्म पुग्ने गरेको पत्ता लागेको हो जसले व्यक्तिको मस्तिष्क सहित विभिन्न अङ्गमा असर गर्ने गरेको बताइएको छ ।
विशेषगरी तेलजन्य पेन्टले अनगिन्ती भिओसी पदार्थहरु बाहिर फाल्ने गरेको प्रोफेसर क्लिफोर्ड वेइसल बताउँछन् । त्यसैले कम देखि शुन्य भिओसीयुक्त पेन्टको प्रयोग सबैभन्दा सुरक्षित हुने बताइएको छ । भीओसी बाहेक पेन्टका अन्य केमिकलहरुमा पनि विषादीजन्य गुण हुन्छ । त्यसकारण पेन्ट लगाएको कोठामा सधैँ झ्यालढोका खुला राख्ने गर्नुपर्ने वा पङ्खा अन गरेर छाड्न विज्ञहरुको सुझाव छ ।